Dowladda Soomaaliya oo u digtay dadka dhaqaalaha siiya ururka hubaysan ee Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Soomaaliya oo u digtay dadka dhaqaalaha siiya ururka hubaysan ee Al-Shabaab
July 23, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Taliyaha haayada nabadsugida NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa u digtay dadka dhaqaalaha siiya ururka hubaysan ee Al-Shabaab.
Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen saraakiil katirsan dowladda oo xalay ka dhacay Muqdisho, ayaa taliyaha haayada nabadsugida NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe ku sheeay in dowladda ogtahay in dad badan ay Al-Shabaab siiyaan taageero maaliyadeed.
“Waxaa beryahaan caado laga dhigtay in dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ururka nabad diidka ee Al-Shabaab ay lacag baad ah ka qaadaan iyaga oo lacagahaas magacyo badan ugu kala yeera Sakawaat in ay dhahaan sidoo kale taakulayn iyo magacyo badan,” ayuu yiri Sanbaloolshe.
Ugu dambayn, taliyaha ayaa sheegay in cidii lagu ogaado in ay dhaqaale siiso Al-Shabaab laga qaadi doono tilaabo sharciga waafaqsan.
Ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh urur weynaha Al-Qaacida ayaa laga saaray intooda badan magaalooyinka waa-weyn ee koonfurta Soomaaliya balse weli waxa ay ka taliyaan deegaano badan oo miyi ah.
September 28, 2017 Ugu yaraan todobo qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Haayada caruurta u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNICEF xafiiskeeda Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay saamaynta uu dagaalka Gaalkacyo ku yeeshay waxbarashada caruur gaaraysa 20,000. Sida ay sheegtay UNICEF caruurta 20,000 gaaraysa ayaa qayb [...]